Items 1 to 16 of3total
ကလေးတို.ရဲ. ငါးကလေးများအတွက် ငါးကန်အသေးလေးတွေကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ ငါးကန်အသေးလေးဟာဆိုရင်ဖြင့် အလွယ်တကူ သန်.ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ပြီး ငါးကလေးတွေကို ဟိုရွေ.ဒီရွေ. လုပ်စရာ လိုတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ဆောင်အဖြစ် အပင်လေးတစ်ပင် ပါဝင်ကာ ငါးကန်လေးကို လှပစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခဲလုံးလေးတွေနဲ. LED မီးသီး အဖြူရောင်လေးလည်း လက်ဆောင်အနေနဲ. ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ အပေါ်မှ ရေလောင်းပေးလိုက်ပါ။ ရေဆိုး ရေညစ်တွေက ပိုက်မှတစ်ဆင့် အပြင်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို.ထပ်စောင့်နေမှာလည်း? မိတ်ဆွေ ခလေးက ငါးလေးတွေကို ချစ်တတ်ရင်တော့ အခုပင် ပစ္စည်း မပြတ်ခင် အမြန်ဝယ်ပေးလိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း - ၁၇၀၀၀ ကျပ် Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09961127000 (Office) ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမဆက်လိုသူများအတွက် Order form https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
25 ~ 5005 $
Master Card သည် Prepaid Card အမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့သုံးပြုလိုသော ငွေပမာဏ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ပြည်တွင်းဘဏ်များရှိ ATM စက်များ တွင် ငွေသားထုတ်ယူခြင်း ပြုလုပ်၍ မရနိုင်သေးပါ။ နိုင်ငံခြားရှိ ATM စက်များတွင်ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကဒ်အတွင်းသို့ အနည်းဆုံး USD20 မှ အများဆုံး USD5000 အထိထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Online Store Website များရှိ မည်သည့် Master Card လက်ခံသော Website တွင်မဆို ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း ၊ Credit ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Master Card လျှောက်ရန်အတွက် Email လိပ်စာ ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ၊ ထိုးမြဲလက်မှတ် နှင့်တကွ Application Form တွင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ (ဖြည့်သွင်းမှုပြုလုပ်ရန် ကျွန်တော်တို့ Myanmar Online Payment Service နှင့် ဆက်သွယ်ရပါမည်။) Application Form တွင်ဖြည့်သွင်း၍ အတည်ပြုချက်ရမှသာ ကဒ်လျှောက်ရန်အတွက်ငွေပေးချေရပါမည်။ ကဒ်လုပ်ရန် ငွေပေးချေမှုအားအဆင်ပြေမှုရှိစေရန် ကျွန်တော်တို့ဖက်မှ mobile Banking , internet Banking , Telenor Wave Money ,Bank Transfer, OK$ တို့ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ Master Card ပြုလုပ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်မှာ ကဒ်တန်ဖိုး 5000ကျပ် ၊ Myanmar Online Payment Service Charges 3000ကျပ် နှင့် ပထမဦးစွာကဒ်အတွင်းငွေဖြည့်သွင်းခြင်းအတွက် 20$ (ပေါက်ဈေးအတိုင်းအနီးစပ်ဆုံး - ဥပမာ။ 1$=1180ကျပ် ရှိလျှင် 1200ကျပ်ဖြင့်တွက်ချက်ခြင်း) တို့ကျသင့်ပါမည်။ အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးသော အမြန်ချောပို့ ၀န်ဆောင်မှု ရယူလိုပါက လူကြီးမင်းထံမှ ကုန်ကျစရိတ်ထပ်မံကုန်ကျပါလိမ့်မည်။ Master Card အတွင်းသို့ ငွေပြန်ဖြည့်သွင်းခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ဖက်မှ mobile Banking , internet Banking , Telenor Wave Money ,Bank Transfer, OK$ တို့ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အသေးစိတ်မေးမြန်းလိုပါက Message Box မှဖြစ်စေ ... PH : 09964520032,09799520032 သို့ဖြစ်စေ .... Email : [email protected] သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
350 ~ 500 Kyats
လူကြီးမင်းတို.လုပ်ငန်း၏ထုတ်ကုန်(product)အေ၇ာင်းမြှင့်တင်၇ာတွင် လက်ကိုင်ပုဝါ(့hand towel )ကို promotion item အဖြစ်အသုံးပြုနေပါသလား။ အကယ်ရျွှ် အသုံးပြုနေပါက လက်ကိုင်ပုဝါကို သမ၇ိုးကျ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှိထုတ်ကုန်၏brand ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော။ ထုတ်ကုန်၏concept ကို ဖော်ပြပေးနိုင်သော ဆွဲဆောင်မှု၇ှိသော ထုတ်ပိုးမှုဒီဇိုင်း ပုံစံသို့ကျွန်ုပ် တို .လုပ်ငန်းမှထုတ် လုပ် သော press towel ကို အသုံးပြု ပြီးပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ နေ၇ာတခုမှတခုသို့ သင်္ယင်္် ဆောင်၇ာတွင်လွယ်ကူပေါ့ပါးခြင်း ။သိမ်းဆည်း၇ လွယ်ကူခြင်းတို.ကြောင့် promotion team များ အတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေပါသည်။ှံ. Daily promotion အတွက်ပဲသုံးသုံး monthly promotion အတွက်ပဲသုံးသုံး လက်ကိုင်ပုဝါ(့hand towel ) ကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ် တို.လုပ်ငန်း နှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ။ါ